आईपीएलमा आज रोयल च्यालेञ्जर्स बेंग्लोर र किङ्ग्स ११ पञ्जाब भिड्दै
On: २०७७ आश्विन ८ गते, बिहीबार, ०६:३५ बजे प्रकाशित
एजेन्सी। आईपीएलको छैठौँ खेलमा आज लिग नजितेका दुई टोली रोयल च्यालेञ्जर्स बैंग्लोर र किङ्ग्स ११ पञ्जाब एकापसमा भिड्दै छन्।
दुबई अन्तराष्ट्रिय खेल मैदानमा हुने उक्त खेल नेपाली समयअनुसार ७ः४५ मा सुरु हुने छ। लिग जित्न आतुर रहेका दुवै टोलीका लागि यो खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। बैंग्लोर पहिलो खेलमा हात पारेको जित दोहोर्या‍उन चाहन्छ भने पञ्जाब चाहिँ पहिलो खेलमा सुपर ओभरबाट हारेको खेलको पीडा भुल्दै यो खेलमा जित हासिल गर्न चाहन्छ।
यो खेल दुवै टोलीलाई लय समाउन पनि निकै महत्वपूर्ण छ। दुवै टोलीको ब्याटिङ पहिलो खेलमा राम्ररी चल्न सकेको थिएन। एरोन फिन्च, एबी डे भिल्लयर्स र विराट कोहली जस्ता खेलका महारथी रहेको टोली बैंग्लोरले सनराइजर्स हैदराबादविरुद्ध मात्र १६३ रन बनाउन सक्यो।
अन्य सम्बन्धित समाचार: लंका प्रिमियर लिगमा सन्दीप लामिछाने असफल
देवदत्त पाडिकल र डे भिल्लयर्सले अर्धशतक बनाएपनि अरु ब्याट्सम्यान चल्न सकेनन्। ब्याटिङमा मजबुत मानिने टोली बैंग्लोरलाई यो निकै नै चिन्ताको विषय हो। युजभेन्द्र चाहालको ३ विकेट र अरुको किफायती बलिङले गर्दा मात्र पहिलो खेलमा टोली विजयी भएको हो तर टोली बलिङमा नै भर पर्ने अवस्था भने छैन।
बलिङमा आईपीएलकै सबैभन्दा कमजोर टोली बैंग्लोर मानिने हुनाले पनि ब्याटिङ सुधार्नु पर्ने बाहेक अरु विकल्प टोलीसँग छैन।
तर ब्याटिङको चिन्ता भने पञ्जाबलाई पनि उत्तिकै छ। पहिलो खेलमा दिल्लीविरुद्ध १५६ रनको लक्ष्य पछ्याउन नसकेकाले यो चिन्ता बढेको हो।
ग्लेन म्याक्सवेल, निकोलस पुरान, के.एल. राहुल जस्ता विस्फोटक ब्याट्सम्यान चल्न नसके पञ्जाबलाई ठूलो समस्या पर्ने छ। हुन त पहिलो खेलमा क्रिस गेल नभएका कारण पनि टोलीलाई केही घाटा थियो। पहिलो खेलमा मयांक अग्रवालले विस्फोटक पारी खेल्दै ८९ रन बनाएका थिए। तर कगिसो रबाडाले सुपर ओभरमा उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि टोली जितबाट वञ्चित भएको थियो।
अन्य सम्बन्धित समाचार: आईपीएलमा राजस्थान रोयल्स विजयी
पछिल्लो सिजन अन्तिम चार ओभरमा यी दुई टोलीविरुद्ध सबैभन्दा बढी रन प्रहार हुने गरेको छ। यो कुरामा दुवै टोलीले सुधार गर्ने आशा राख्न सकिन्छ। पञ्जाबले दिल्लीसँगको पहिलो खेलमा दिल्लीले पछिल्लो ३ ओभरमा ५७ रन प्रहार गरेको थियो।
के.एल. राहुललाई आईपीएलमा २००० रन पूरा गर्न मात्र दुई रन बाँकी छ र आज त्यो पूरा गरे ६० पारीमा सबैभन्दा चाँडो २००० रन पुर्या‍उने भारतीय खेलाडि हुनेछन्। अर्कोतिर डेल स्टेनलाई आईपीएलमा १०० विकेट पूरा गर्न पनि मात्र ३ विकेट चाहिन्छ।
२०७७ आश्विन ८ गते, बिहीबार, ०६:३५ बजे प्रकाशित
कराँचीमा बम विस्फोट, ३ जनाको मृत्यु
सुनको भाउ तोलामा ८ सय रुपैयाँ बढ्यो
बर्दियामा २३ किलो लागुपदार्थ सहित एक महिला पक्राउ
सुदूरपश्चिम सरकारले कोरोनाका बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने
नवलपरासी: सीमा क्षेत्रमा ओहोरदोहोर बढ्दै
काठमाडौंको बालगृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार
दशैंको पाँचौ दिन बुधबार स्कन्दमाताको पूजा गरिँदै
झापामा कोरोनाबाट एकै दिन तीनको मृत्यु
आईपीएलमा किंग्स ११ पञ्जाब विजयी
पाकिस्तानमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था केही खुकुलो
आईपीएल: दिल्ली र पञ्जाबबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै